I-OPPO yokuqala enokusondeza okubonakalayo iza kufika ngo-Epreli | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Kwixesha elidlulileyo le-MWC 2019 OPPO isishiye nayo entsha Itekhnoloji ye-10x Optical zoom. Kulindelwe ukuba uphawu luzakusebenzisa kungekudala kwii-smartphones zalo, apho uphawu lwakhe luthethile kwezi veki zidlulileyo. Kodwa kubonakala ngathi asizukulinda ixesha elide kude kube le modeli iza kuphehlelelwa ezivenkileni. Ubuncinci sinomboniso ocwangciselwe inyanga ka-Epreli.
I-brand ngokwayo ibhengeze ukufika kwayo ngo-Epreli. Asazi ukuba yinkcazo okanye ukumiliselwa kwayo, okanye mhlawumbi zombini. Kodwa le fowuni yokuqala ye-OPPO iya kuba semthethweni ngo-Epreli, ngophawu lwe-brand zoom. Yintoni egqithisile, ezinye zeempawu zalo ziye zavuza Ukuza kuthi ga ngoku.
Le modeli iya kuba yinto ephezulu kuluhlu lwegama laseTshayina. Kuba izakufika nge Iprosesa ye-Snapdragon 855 ngaphakathi. Ke amandla ayakuba yinto esinokuyilindela kule modeli. Iya kufika ihamba ne-8 GB ye-RAM kunye ne-256 GB yokugcina. Asazi ukuba kuyakubakho indibaniselwano engaphezulu, le yifayile ehluziweyo ukuza kuthi ga ngoku.
Ukongeza, iya kuba nefayile ye- Isikrini esine-FullHD + isisombululo seepikseli ezingama-2.340 x 1.080. Ngaphakathi kwifowuni kunokusebenzisa ibhetri enkulu, 4.065 mAh. Ke ikwathembisa ngokuzimela okuhle ngalo lonke ixesha. Kwakhona, kujongeka ngathi bekuya kubakho ikhamera ephindwe kabini kuyo. Nangona singenazo iinkcukacha ngayo.
Ngokuqinisekileyo kwezi veki kuyakubakho idatha malunga nale fowuni ye-OPPO. Ingakumbi kuba uphawu luqinisekisile ukuba luza kuba ngo-Epreli xa luza kuba semthethweni. Ke malunga neeveki ezine kufanele ukuba sele sinayo yonke idatha kolu luhlu lutsha lwenkampani.
Siza kuqaphela ulwazi olutsha malunga nalo. Kuba iyifowuni yokuqala ye-OPPO ukukhupha oku kunomdla Itekhnoloji ye-10x Optical zoom ababezise phambi kukaFebruwari. Itekhnoloji evelise umdla kwaye kulindeleke ukuba ikwazi ukujonga ukusebenza kwayo kwi-smartphone ngale ndlela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-OPPO ukumilisela i-10x yefowuni yokusondeza ngo-Epreli